Fashion hoop ọlaedo silver plated hoop gburugburu anaghị agba nchara ọla ntị - China Jinyun ọla
Fashion hoop ọlaedo silver plated hoop gburugburu anaghị agba nchara ọla ntị
price / $: 2,7574
ibu / g: 14
Send email anyị More Latest Products Download as PDF
Banyere anyị Julong ọla e hiwere na 2006. Anyị ụlọ ọrụ dị na Guangzhou, China. Anyị na-pụrụ iche na igwe anaghị agba nchara ọla N'ogbe site B2B na ndidi na ihe karịrị 10 afọ nke azụmahịa na a akara. N'ihi ya, anya, anyị na e kwenyere na ihe karịrị 300 suppliers kemgbe ahụ na inwe ọtụtụ adaba ugwo ụzọ, kacha mma ahịa na ọrụ anyị ahịa. E nwere ihe karịrị 100,000 dị iche iche na aghụghọ na ị pụrụ ịhụ site na anyị website, www.julongsteeljewelry.com . All ndị ọhụrụ ụdị ga-emelitere site n'izu ọ bụla maka banyere karịa 2000pcs ọhụrụ ngwaahịa. Products aghụghọ dịgasị iche iche ndị dị nnọọ ọtụtụ ebe na ike n'ụzọ zuru ezu afọ ju ọtụtụ dị iche iche ahịa si mba dị iche iche 'mkpa. Anyị nwere ihe karịrị 10,000 edebanyere so na-site n'ụwa nile, ha ga-ejikarị eme mgbe nile iji na-re-na-na ngwaahịa nke ga-eme ka ha ọtụtụ adaba ebe ọ bụ na anyị na ndị ahịa na mkpa banyere 3-15 ụbọchị na-enweta ngwá ahịa ha.
Anyị na-enye nnọọ ala na-eri ihe na ngwa na-adaba adaba ugwo ụzọ, dị ka Ṅaa-PAL, Bank nyefe, Western n'otu na Money gram. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, biko egbula kpọtụrụ anyị. Email: julong@julongsteeljewelry.com Whatsapp: +86 18028698162 Ezi echiche Gịnị bụ nkọwa nke gị ngwaahịa? . Ihe: elu mma igwe anaghị agba ígwè . Atụmatụ: dịghị nickel, idu ndú, nchara, na-echebe akpụkpọ ahụ . Ezubere maka onye wear ma ọ bụ n'ihi nna, nne, na enyi, di na nwunye, di na nwunye Christmas, Halloween, ụbọchị ọmụmụ, ncheta onyinye. . 1 00% na-anwale, 100% quality na-ekwe nkwa! . Iji mirror polishing, nke mere na n'elu ezochi ihe udidi. . Mgbe ọtụtụ ndị ezi-egweri, enweghị ntụpọ. Ewepụghị enweghị protrusion. Gịnị mere na ị họrọ gị ụlọ ọrụ? Main ngwaahịa - pendant chaplet, ọla aka, ọla aka, mgbaaka, ọla ntị, necklaces, isi yiri mgbaaka, wdg
Dị iche iche anaghị agba nchara ngwa. Business nlereanya - na anyị bụ a ọkachamara na ahụmahụ ọla emeputa kemgbe 2006. Quality akara - na anyị nwere anọ echesinụ àgwà akara usoro na ịtụkwasị nanị anyị ọrụ. R & d - na anyị nwere a ọrụ otu nke mmekọ ndị na-enwe mmetụta ọsọ ọsọ na-emepụta ejiji na ngwa. Nkwarụ nkwụghachi iwu - - na anyị ga-erube nnọọ elele niile ngwongwo 3 usoro tupu Mbupu. Ọ bụrụ na e ọ bụla mma nsogbu n'ihi nnyefe, biko agwa anyị na oge (n'ime 15 ụbọchị mgbe ị na-enweta ngwugwu). Anyị ga nkwụghachi gị ma ọ bụ dochie ị na-esonụ iji.
Daalụ maka ase. Anyị bụ ndị anaghị agba nchara ọla emeputa na wholesaler, otú anyị moq bụ USD 300, 3 PC kwa imewe kwa size. Ma ọ bụrụ na gị mkpa n'ezie sample nwalee, ị nwere ike ịtụ USD 100 dịkarịa ala, na mbupu na-eri bụ banyere USD 30 n'ihi na 1 n'arọ. Ya bụrụ na anyị nwere ike iru mma azụmahịa na enyi. Ezi echiche Bella
Kpọtụrụ anyị Anyị niile nwere onye na aka ịza ajụjụ gị. Anyị kweere na ka ọbịbịa nke ndị ahịa ọrụ, na ga-eme ihe niile kwere omume ka afọ ju anyị ahịa. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla, na-ekwu, ma ọ bụ aro, biko kpọtụrụ anyị. email: julong@julongsteeljewelry.com Otu Ọkwa: (accoring gị iji ego, ị ga-enwe dị iche iche ozo disccount) Level1 5% Level2 8% Level3 10% Level4 12% Level5 15% Level6 18% Level7 20%
Ma anyị natara ihe na ọzọ iwu ụbọchị ọ bụla, anyị na-agbazi anyị na-arụ ọrụ usoro iji nye a mma ọrụ n'ihi na ndị ahịa anyị na-eme ka n'aka ndị ahịa anyị nwere ike na-enweta iwu na oge. Esonụ bụ ọhụrụ anyị na-arụ ọrụ nzọụkwụ: (Dị ka Bejing Time) 1. Kwa ụtụtụ, n'ihi na niile ọhụrụ iwu nke na-akwụ ụgwọ na-ama n'ihu 12:00 ehihie, anyị ga-eme ndokwa ka ọ na-elele na ngwaahịa na otu ụbọchị. Ọ bụrụ na ị na-eme na ugwo mgbe 12:00 ehihie, anyị ga-eme ndokwa ka ọ na-elele na ngwaahịa na-esote ụbọchị. 2. Mgbe ị natara mbukota ndepụta, ma ọ bụrụ na ị pụrụ ime ka ndị ikpeazụ ugwo tupu 6:00 pm, anyị nwere ike ụgbọ mmiri si na iji n'otu mgbede. Ọ bụrụ na ị na-eme na ugwo mgbe 6:00 pm, anyị ga-ụgbọ mmiri na-iji na-esote ụbọchị. 3.For iwu nke na-akwụ ụgwọ na-ama, ma ọ bụrụ na i mere na-agbakwunye ka emecha itule tupu 12:00 ehihie, anyị ga-ezitere gị ndị ikpeazụ mbukota ndepụta n'otu mgbede na ụgbọ mmiri na-iji na-esote ụbọchị. Ọ bụrụ na i mere ihe na-agbakwunye ka emecha itule mgbe 12:00 ehihie, anyị ga-ndokwa na-agbakwunye iji na-ezite ikpeazụ mbukota ndepụta na echi ka ị na iji ga-ụgbọ mmiri mgbe echi. Tupu ị na-eme iji, biko obiọma ndokwa oge dị ka gị onwe gị na ọnọdụ. Ndo maka ihe ọ bụla mma na mere ka ị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko na-eche free ịkpọtụrụ anyị. N'ihi. Ezi echiche.
Paypal akaụntụ: julong@julongsteeljewelry.com Western Union Biko kpọtụrụ na anyị tupu ị na-eme na ugwo site n'ebe ọdịda anyanwụ n'otu, na-elele erite aha. Bank Nyefee Ozi Company na akaụntụ
Erite uru Bank Aha HSBC
Aha Ụlọ Ọrụ Jinyun Trade Limited
Bank Account dịghị 801406885838
erite uru Bank 1 Queen si Road Central, Hong Kong
Swift koodu HSBCHKHHHKH
Mbupu Policy Anyị ụgbọ mmiri ọ bụla na adreesị na ụwa. Ihe nyere iwu site n'ọnụ anyị na-Ẹnam ekese site EMS ma ọ bụ TNT ma ọ bụ DHL ma ọ bụ FedEx ma ọ bụ gbasie. Anyị ga-agwa gị na nsuso Ee site e-mail ka anya dị ka gị iji na-Ẹnam ekese mgbe anyị na-enweta ya na awara awara ụlọ ọrụ. A n'okporo ámá adreesị a chọrọ maka nnyefe. Ngwá ahịa ga-anapụta ọkọlọtọ Air-awara awara n'ụlọ n'ụlọ, nke na-ewe ihe dị ka 3-5-arụ ọrụ ụbọchị. Oge nzipu anaghị agụnye nhazi oge. Anyị na ngwaahịa na-Ẹnam ekese si kwa ụbọchị, site na Monday na Saturday, ma e wezụga ememe. Ọtụtụ iwu enịm na weekdays ga-Ẹnam ekese ke 2 ma ọ bụ 3 ụbọchị, mgbe iwu enịm ná ngwụsị izu ga-Ẹnam ekese ndị na-esonụ Monday. Ị ga-enweta ihe e-mail nkwenye na gị nsuso nọmba. Iri-na-anọ awa mgbe ị na-enweta gị nsuso nọmba, ị ga-enwe ike soro gị iji online na http://www.ems.com.cn/english-map.jsp http://www.tnt.com http: / /www.dhl.com/en.html http://www.ups.com/en.html http://www.fedex.com Oge nzipu iche dabere na mba nke na-aga.
Mbupu Ụzọ anyị nzipu julong ọla emeworo siri ike mmekorita ya na niile nnukwu anọ mbupu ụlọ ọrụ: DHL, gbasie, FedEx na TNT inye ọkachamara n'ụwa nile ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ nnyefe. Oge Mbuga ozi Ihe ga-Ẹnam ekese si na-esonụ ahịa ụbọchị mgbe unu enyocha. Ke ofụri ofụri, ọ pụrụ iri banyere 3-5 ahịa ụbọchị n'ihi na nnyefe, dabere dị iche iche nnyefe pụtara na ị họrọ. Anyị abụghị ndị na-ahụ maka na-ezighị ezi ma ọ bụ undeliverable address. Biko eme ka n'aka gị mbupu adreesị bụ eziokwu na nke na deliverable. Order Ndepụta Anyị na-ekwe gị soro gị iji na click nke a òké. Mgbe gị Mbupu na-egosi, ị ga-enweta a nsuso nọmba gị nkwenye e-mail. Ole ọ ga-ewe m ihe iru m? Biko mara na azụmahịa ụbọchị, ewepu Saturday, Sunday na Public Ememe, na-gbakọọ na okwu nke nnyefe oge. Ke ofụri ofụri, ọ na-ewe banyere 3-5 ahịa ụbọchị n'ihi na nnyefe. Olee otú m pụrụ soro m Mbupu? Anyị ụgbọ mmiri gị zụọ tupu ọgwụgwụ nke na-esote ụbọchị azụmahịa mgbe unu enyocha-esi. Anyị ga-eziga otu e-mail na nsuso nọmba otú ị nwere ike ịlele ọganihu gị nnyefe na ụgbọelu 'website. Gịnị ka m kwesịrị ime ma ọ bụrụ na m Mbupu mgbe abịarute? Biko ekwe ruo 10 ahịa ụbọchị n'ihi na gị ihe ga-anapụta. Ọ bụrụ na ọ ka na-na-abata, biko iru anyị site na ịpị "Kpọtụrụ Anyị" button na website. Anyị ga-azụ gị ngwa ngwa.
Previous: Fashion hoop ọlaedo silver plated hoop gburugburu anaghị agba nchara ọla ntị
Next: Fashion ọla ladies anaghị agba nchara olu
Big hoop Ọla ntị
Black plated Now Studs ọla ntị
Cross ọla ntị
Cross hoop Ọla ntị
omenala igwe anaghị agba nchara ọla ntị
dobe ihe nti
dobe Ọla ntị N'ihi Women
ihe nti ọla
Factory Price igwe anaghị agba nchara ihe nti
Gold hoop ọla ntị
Heart ọla ntị
Large hoop ọla ntị
Letter Ọla ntị
Mini hoop ihe nti
igwe anaghị agba nchara Camber ọla ntị
igwe anaghị agba nchara na abụọ kwadoro Ọla ntị
igwe anaghị agba nchara ihe nti
igwe anaghị agba nchara Now ihe nti
igwe anaghị agba nchara stud ọla ntị
Star stud ọla ntị
N'ogbe igwe anaghị agba nchara ihe nti
Wide hoop ọla ntị